सुनमा भाउले बनायो रेकर्ड नै रेकर्ड ! एक तोलामा ३१ हजार रुपैयाँ बढ्यो « Nepal's number 1 Entertainment news portal
सुनमा भाउले बनायो रेकर्ड नै रेकर्ड ! एक तोलामा ३१ हजार रुपैयाँ बढ्यो
Published : 25 July, 2020 9:46 pm
आर्थिक वर्ष ७६/७७ को पहिलो दिन नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला ६४ हजार पाँच सय थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा सुनको प्रतितोला मूल्य करिब ९५ हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
नेपालमा सुन आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै अनुमति दिएको छ । यस अघि नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयअनुसार चक्रीय पालोमा वाणिज्य बैकहरुले दैनिक जम्मा २० किलो सुन आयात गर्ने गरेको थियो । तर, २०७६ चैत्र १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बैंकहरुले दैनिक १० किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार ट्रेन्ड हेर्दा सुनको मूल्य नेपाली बजारमा तोलामै एक लाख १० हजारसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । हरेक साता रेकर्ड राख्दै अघि बढेको सुनको भाउ लाख कटे आश्चार्य मान्नु नपर्ने महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्य बताउँछन् । सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक १० किलो सुन बिक्री हुने गरेकोमा बढ्दो मूल्यका कारण बजार शिथिल बनेको महासंघले जनाएको छ ।